Infrared Materials Fekitori - China Infrared Zvinhu Zvekugadzira, vatengesi
DIEN TECH inopa akasiyana infrared zvinhu zvine yakanakisa Optical zvakafanana, kuramba acid-base kukurwa uye kugadzikana kwemakemikari mashandiro akakosha emeso macristal anoshandiswa mu IR waveband, kusanganisira ZnSe uye ZnS. Zvakare kugadziriswa kwezvinhu izvi zvinoenderana nekudhirowa uye technical parameter.
Silicon ndeye mono kristaro inonyanya kushandiswa mune semi-conductor uye isiri-inobata pa1.2μm kusvika 6μm IR matunhu. Inoshandiswa pano sechinhu chekuona cheiyo IR dunhu mafomu.
Iyo Germanium seye mono kristaro inonyanya kushandiswa mune semi-conductor haina-absorptive pa2μm kusvika 20μm IR matunhu. Inoshandiswa pano sechinhu chekuona cheiyo IR dunhu mafomu.
Calcium Fluoride yakapararira IR kunyorera seyakachenesa CaF2 mahwindo, CaF2 prisms uye CaF2 lenzi. Kunyanya akachena mamakisi eCalcium Fluoride (CaF2) tsvaga kunoshanda kunoshanda muUV uye seUV Excimer laser windows. Karusiyamu Fluoride (CaF2) inowanikwa doped neEuropium segamma-ray scintillator uye yakaoma kupfuura Barium Fluoride.
ZnS yakakosha kwazvo makristasi akaiswa mu IR waveband. Kutamisa huwandu hweCVD ZnS i8um-14um, yakakwira transmittance, yakadzika kunyura, ZnS ine yakawanda-yakasarudzika nhanho nekupisa etc.
ZnSe rudzi rweyero uye yakajeka mulit-cystal zvinhu, saizi yekristallini inokwana inenge 70um, ichiendesa kubva pa0.6-21um isarudzo yakanakisa yemhando dzakasiyana dze IR zvinoshandiswa kusanganisira yakakura simba CO2 laser masystem.